सरकारले अहिलसम्म कति जनावार उपहार दियो, कति लियो ?| Nepal Pati
सरकारले अहिलेसम्म कति जनावार उपहार दियो, कति लियो ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वितेको ३१ वर्षमा बिभिन्न मुलुकलाई गरी ३० वटा जनावार उपहारस्वरुप दिएको छ । नेपालले सबैभन्दा पहिला बि‍‍‍‍‍.स. २0४४ सालमा अमेरिकालाई एक जोडी गैँडा उपहार दिएको थियो ।
अहिलेसम्म गैँडा, घडियाल गोही, मगर गोही, हिमालयन ब्वाँसो र चितुवा विदेशीलाई उपहार दिइएको छ । वन मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका र भारतलाई ४/४ वटा गैँडा उपहार दिइएको छ भने जर्मनीलाई गैँडा र घडियाल गोही २/२ वटा दिइएको छ ।
सिङगापुर र बङगलादेशलाई २/२ गैँडा, फ्रान्सलाई घडियाल गोही ६ वटा, भुटानलाई – घडियाल गोही २ वटा उपहार दिइएको छ । २ वटा चितुवा साउदी अरेबियाले नेपालबाट उपहार पाएको छ भने बेलायत र जापानले २/२ वटा गैँडा उपहार पाएका छन् ।
जापानले घडियाल र मगर गोहीका ६०/६० वटा अण्डा पनि नेपालका तर्फबाट उपहार पाएको छ । आज मत्रै चीन सरकारलाई नेपालको तर्फबाट एकजोडी गैंडा हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई देश बीचको परम्परागत सम्बन्धलाई गैँडा उपाहारले थप मजवुद बनाएको टिप्पणी गरे ।
भृकुटी र अरनिकोबाट सुरु भएको नेपाल चीन सम्बन्धलाई भद्र र रुपसी नामका गैँडाले थप गाढा बनाएको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका लागि चीनका राजदुत यु होङलाई प्रकृति संरक्षण कोष खुमलटारमा भद्र र रुपसी नामका गैंडाको जोडी हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीका लागि विशेष क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ । दुई वर्ष भन्दा कम उमेरका भद्र र रुपसी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ल्याइएको हो ।